Amandla Omkhuleko - Bookrepublic
Ulele lapho, aceba buthule aceba ububi enhliziyweni yakhe. Ngezikhathi ezithile, ubuka ukubheka kwewashi elisodongeni. Lapho umkhaza wewashi usondela phakathi kobusuku ukumemezela ukuqala kosuku olusha, isikimu esibi siphakama, sigqize isandla sakhe sokudla emoyeni, siphonse wonke umuntu osekamelweni. Futhi bonke baqala ukudonsa ngokushiya ngokunganaki. Manje esekholelwa ukuthi ugu selucacile, uya ejoyina abangane bakhe ababi esivumelwaneni.
Akaziwa yena nozakwabo abenzi bokubi, lowo obeyisisulu sakhe (indodana yomfowabo) necala lakhe abafuna ukuphothula ngalobo busuku nesigwebo sokufa kungazelelwe engozini yomgwaqo, ufundile incwadi enesihloko esithi, Amandla oMkhuleko Wamabili, lapho athola khona ukuthi ukuhlela nokuhlelela ikusasa lokunqoba ngesikhathi sobusuku. Le nsizwa ibhekane nokukhathazeka ngokweqile kanye nenhlekelele empilweni. Cishe yonke into empilweni yakhe isesimeni. Ufisa inkululeko futhi uthathe isinqumo sokuthatha icala lakhe kuNkulunkulu, umahluleli Omkhulu wendawo yonke.